Waxaan rajeynayaa in United-ta Mourinho ay hanato Premier League-ga – Sidaas waxaa yiri Decco – Gool FM
Waxaan rajeynayaa in United-ta Mourinho ay hanato Premier League-ga – Sidaas waxaa yiri Decco
Kaafi October 6, 2016
(Lisbon) 06 Okt 2016. Xiddigii hore ee Chelsea Decco ayaa raba in Manchester United ay ku guuleysato Premier League xilli ciyaareedkan.
39 jirkan ayaa laba sano ku soo qaatay Stamford Bridge, isaga oo halkaas ku qaaday horyaalka iyo FA Cup xilli ay tababareyaal ka soo kala noqdeen Luiz Felipe Scolari iyo Carlo Ancelotti.
Laakiin laacibkii hore ee Portugal waxa uu taageero u muujiyey Jose Mourinho – kaas oo uu la qaaday Champions Leaguue 2004 xilli uu uga hoos dheelayey FC Porto, waxa uuna doonayaa in uu kolkan United u horseedo horyaalka si uu dib ugula soo laabto xogaa ka mida sharaftiisa Old Trafford.
“Marka Jose uu joogo koox, qof walba isaga ayuu eegayaa,: ayuu yiri arbacadii. “Waxaan qabaa in uu yahay shaqsiga ku haboon shaqadaas.
“United waxa ay dooneysaa in ay dib u soo celiso sharaftii kooxda, guulihii iyo horyaaladii. Jose Mourinho waa shaqsiga taa sameyn kara.
“Premier League-gu wuu adag yahay. Ciyaaryahano badan ayaa raba in ay is bartaan, wey adag tahay. Wey horumari doonaan, weyna u dagaalami doonaan Premier League oo la hubo.
“Filashada aad ayey u sarreeysaa si weynna ayey maalgalin u sameeyeen. Qof waliba wax wanaagsan ayuu ka sugayaa United. Aniga sida ay ila tahay waxaan rajeynayaa Jose in uu United kula guuleysan karo Premier League sidii uu Chelsea ku sameeyey.
“Ciyaaryahano kala duwan iyo koox tii ka duwan. Wax walba ma badaleysid, waxaad u baahan tahay la qabsiga koox cusub. Taasi waa caadi.”
Decco waxa uu kalsooni ku qabaa in Antonio Conte, kaasoo majaraha u qabtay Stamford Bridge kaddib markii uu Italy Euro 2016 gaarsiiyey rubuc dhamaadka in uu dib Chelsea guulo ugu keeni doono marka laga yimaado tartanka kordhay ee horyaalka heerka kowaad ee England.
“Waa u caadi kooxaha marka aad bedesho tababareyaasha,” ayuu yiri laacibkii hore ee Barcelona. “Waa tababare aad u wanaagsan, wax walba wuu la qaaday Juventus.
“Aragtiyo cusub ayuu keeni doonaa laakiin waxaan qabaa in Premier League uu ka adag yahay sidii hore. Heerka ayaad aad sare ugu maray. Aad ayey u adag tahay in kulamada la badiyo. Waxaa qabaa in ay caadi tahay.
“Waxa ay heleen Conte si uu dib kooxda heer sare mar kale u keeno. Waxa ay isku dayi doonaan in ay ku guuleystaan Premier League oo ay mar kale Champions League ugu soo baxaan laakiin dabcan Chelsea waxa ay u baahan tahay u dagaalanka horyaalka sanad kasta.”
Arsenal oo mar kale sare u qaadeeysa mushaarka Alex Iwobi
Daafaca Liverpool Nathaniel Clyne oo daaha ka rogay in tababare Jurgen Klopp uu ugu yeero NAANEESTAN….